Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 37
Fahantrana… tsy afaky ny fanampiana sy famalifaliana
Par Taratra sur 27/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita iny ny fety: fisintahana kely, fisentoana… Hatramin’izao, mbola adihevitra be ny amin’ny Fahaleovantenam-pirenena. Eny, na eo aza ny minia mikimpy sy mitampin-tsofina, indrindra amin’izao fahantram-bahoaka lalina sy maharitra izao. Amin’izany, zary nifaninanana ny fisehosehoana sy fisekosekoana hoe mahatsiaro vahoaka: manome fanampiana, mamalifaly, miseho ho akaiky… Te hoderaina? Tsy hifanomezan-tsiny; eny, na eo aza ny […]
Fahaleovantena… i Madagasikara ho an’ny Malagasy
Par Taratra sur 24/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fahaleovantena? Tsaroana isan-taona toy izao, fa tsy hita be ihany mandavam-piainana sy mandavantaona. Nahoana? Tsy misitraka inona amin’izany ny vahoaka. Hatramin’izay, mbola adihevitra na tsy mampitovy fijery koa ny amin’izay Fahaleovantena izay: an-taratasy sy am-bava ihany? Na sandoka na sarintsariny… Misy milaza fa Fahaleovantena politika ihany, hono, no azo na hoe tafaverina hatramin’izay. Mbola ady […]
Par Taratra sur 23/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mahagaga sy mahavariana ny tompon’andraikitra eto amintsika. Amin’ny andavanandro, efa mila tsy ho zaka ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra. Mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena, notapahina indray ny lalana marobe. Ireo mpivarotra, nahazo maminy amin’ny baranahiny sy hidongy eo an-dalambe fa tsy mandeha, hono, ny tsena raha tsy eo ihany. Tsy hita izay fandaminana ataon’ny kaominina […]
Zaro amin’ny lalana tokony halehany…
Par Taratra sur 22/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Azo lazaina ho fahombiazana ny hetsika lehibe nokarakarain’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco), tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy fanatanjahantena, Mahamasina, omaly. Hetsika tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny Andron’ny tambajotran’ny mpianatra sy tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Efa andiany fahadimy sahady moa izy ity, ary nampitondraina ny lohahevitra hoe « Tanora mandray andraikitra, […]
Par Taratra sur 21/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mampitaintaina ny rehetra ny fetim-pirenena indray mandeha ity. Tsy maintsy mbola hitamberina an-tsaina indray ilay fipoahana nahafaty olona tetsy Mahamasina, ny harivan’ny 26 jona 2016, rehefa lasa nody avokoa ireo mpitondra. Hatramin’izao, tsy mbola hita tohiny iny raharaha iny. Nifarana teo rehefa nailika fotsiny amin’ny hoe ny mpanohitra no tao ambadik’izany. Ekena fa efa nilaza […]
Io indray aza fa 26 jona…
Par Taratra sur 20/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fetibe anie izany fankalazana ny 26 jona izany taloha e ! Milahatra amin’ny fetin’ny Noely sy taom-baovao mihitsy raha ny fanomezan’ny Malagasy lanja azy. Saingy taloha izany… Taloha, nahavita nanangona mihitsy ny isan-tokantrano hifaliana rehefa 26 jona. Taloha, nahavita nanangona mba hodiana an-tanindrazana, hiara-hifety amin’ny fianakaviana ireo mila ravinahitra. Taloha, fanampiny ny fampifalifalian’ny fanjakana fa efa […]
Par Taratra sur 19/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita, omaly iny ny fetin’ny ray. Niezaka nanao araka izay vitany ny renim-pianakaviana sy ny zanaka, nahatsiaro tamin’ny fanomezana sy nahandro sakafo mihoatra amin’ny mahazatra. Matetika aloha, aty an-tanàn-dehibe no tena ahitana izany satria aoka ho fantatry ny mpamaky, fa fankalazana sy fomba vahiny no ahafantarana ny fetin’ny ray sy ny reny. Aoka kosa hazava […]
Fitondrana… mamono afo
Par Taratra sur 17/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fitakiana etsy, fitokonana eroa… Mitaky ny fanajana ny hasina sy ny fahaleovantenan’ny fitsarana, ohatra, ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM). Eo koa ny an’ny Sendikàn’ny mpirakidraharaha fitsarana (SGM), mitaky ny fanajana ny fanondrotana grady, tambin-jo… andrasam-bokatra afaka 15 andro. Miandry hatramin’ny 26 jona ny an’ny Sendikàn’ny mpiasan’ny ladoany (Sempidou). Eo ny an’ny Sendikàn’ny tantsambo eto […]
Par Taratra sur 16/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Sazy mihantona telo volana ny an’ilay mpamily mamo nahafaty olona teny Alarobia. Sazy mihatra herintaona ny an’Iary Rapanoelina, nanokatra pejy nanohintohina olona maro tao anaty “Facebook”. Ny hitovian’ireo tranga roa ireo, samy nisintona ny fitoriany avokoa ny mpitory … Niraradraraka avy hatrany ny fanehoan-kevitry ny maro, indrindra anatin’ny tambajotran-tserasera “Facebook”. Nahoana moa no misy fitanilana? […]
Mijinja ny nafafy
Par Taratra sur 15/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Misasaka ny taona 2017 ! Fotoana hiomanan’ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana, santarin’ny CEPE amin’ny 20 jona ho avy izao. Voalaza fa mety ho ity no hanaovana ity fanadinana ity farany, fa ho foanana amin’ny taom-pianarana 2017-2018. Raha ny vanim-potoana ankehitriny, tsy manan-danja firy intsony ity diplaoma ity na tsy milaza mivantana an’izany aza ny fanjakana, fa […]
Par Taratra sur 14/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Kabary tsy valin’ny mpitondra tato ho ato indray ny amin’ny fanajana sy fampiharan-dalàna, fandraisana andraikitra. Mby iza? Tsy misy tsy mikaikaika izao ny amin’ny tsy fandriampahalemana, ohatra, mampirongatra ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Eo koa ny fidangan’ny vidim-piainana, lazaina fa misy manararaotra. Samy tomponandraikitra amin’izany, hono, ny rehetra sy ny tsirairay. Marina tokoa izay. Saingy […]
Tena “Fanjakan’i Baroa” e!
Par Taratra sur 13/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Mampiaiky, mampitampim-bava ny ataon’ity fitondrana ity sy ny… forongony. Misesisesy loatra, mba tsy hilazana hoe, isan’andro vaky, ny fihetsika na trangan-javatra manamarina fa tena “Fanjakan’i Baroa” no misy eto amin’ny firenena ankehitriny. Manamarina sy manamafy indray izay efa voalaza tany aloha rehetra tany ity fanamparam-pahefana, fanaovana barofo nataon’ity manamboninahitra kolonely, ity tamin’ireo mpiasan’ny ladoany nanao […]
Kobaka am-bava no betsaka
Par Taratra sur 12/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Lany ny ranomainty, mila ho ritra ny rora raha izay efa nambara mikasika ny firongatry ny tsy fandriampahalemana eto amin’ny tany sy ny firenena izay. Tsy an-tsaha, tsy an-tanàna. Na Malagasy na teratany vahiny, na ny manana na ny tsy manana… Tsy misy izay tsy mitondra faisana. Mampikaikaika, mampivarahontsana. Tsy ahitan-tory fa mampandry an-driran’antsy andro aman’alina, […]
Lo olona i Madagasikara, lao olana ny Malagasy…
Par Taratra sur 10/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Isa, roa… Inona moa, rey olona, fa ireo loholona manala bara-batana amin’ny tsy fanarahan-dalàna ankitsirano, na hoe mpanao lalàna aza. Mby ao an-tsaina ny nafitsoky ny iray nitaona andian’olona teny anivon’ny biraom-panjakana; ny faharoa, nanery ny mpitsara hamoaka ben’ny Tanàna notanana am-ponja vonjimaika. Iza na aiza sy ahoana koa? Ny lohany na ny loholona indray […]
« Mba te hahita izahay… »
Par Taratra sur 09/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Hiditra amin’ny fepetra henjana kokoa ny Sendikàn’ny mpitsara (vakio ny lahatsoratra etsy ankilany). Raha mitohy manao bemarenina amin’ny fanairana hataon’ireo mpitsara ny fanjakana, ho avy ny dona mafimafy. « Mba te hahita izay izany fepetra henjana izany izahay », hoy ny mpandalo iray tetsy amin’ny Fitsarana Anosy, nahita ireo sora-baventy milaza ny fiatoan’ny raharaham-pitsarana rehetra manerana ny […]
Ny kely tsy mba mamindro
Par Taratra sur 08/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Hafa mihitsy ve isika eto Madagasikara? Tato ho ato, tsy nisy fotoana tsy nahenoana fitokonana sy fitakiana tetsy sy teroa. Nitaraina amin’ny halafosan’ny saram-pisoratana anarana ny mpianatra teny Ankatso sy Vontovorona. Nitaky ny anjara tambin-karamany tsy voaloa ny mpampianatra mpikaroka ao anatin’ny sendikà Seces. Nitaky ny fiara tsy mataho-dalana 4×4 ny solombavambahoaka. Nitaky ny tambin-karama […]
Dingana iray sisa dia…
Par Taratra sur 07/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Manao dingan-dava ny taona 2017. Tsy hitahita akory, efa misasaka sahady izy ity. Toa mifanohitra amin’izany anefa ny fizotran’ny fiainan-dRamalagasy. Manao dingana ihany, saingy tsy mandroso fa mihemotra. Mirimorimo izany fihemorana izany, tena tsy ho voasakana mihitsy. Dingana iray sisa dia hitsingidina sy hidaraboka. Vahoaka noana, tsy mahita izay harapaka. Mitady ny anio hohanina androany. […]
Ho hitan’ny havany eo izay vitan’ny vavan’ireo…
Par Taratra sur 06/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Ahoana ihany izao raharaham-pirenena izao? Ny ady amin’ny fahantrana, ny fiainam-bahoaka, ny fampandrosoana… Tato ho ato, manokana na lany fotoana amin’ny fanamarinan-tena ny mpitondra: manilika ny tsy fahombiazana amin’ny lasa na amin’ny hafa. Raha tsy izany, mifanasa vangy amin’ny hoe mpanohitra. Fiteny ny hoe any aoriana ny mpanenjika, fa toa tsy izany loatra ny raharaha […]
Ny hery tsy mahaleo ny fanahy…
Par Taratra sur 03/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
“Fa hahazo hery ianareo rehefa hilatsahan’ny Fanahy Masina, ka ho vavolombelona hanambara Ahy eto Jerosalema sy eran’i Jodea mbamin’i Samaria ary hatrany amin’ny faran’ny tany.” (Asa 1: 8, Diem). Tsaroana hatrany izany isaky ny Pentekosta toy izao, fahatsiarovana ny firotsahan’ny Fanahy Masina tamin’ireo Apostoly mpianatr’i Kristy amin’ny finoana kristianina. Amin’izao fotoan-tsarotra izao, mbola inoana sy […]
Par Taratra sur 02/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Miandry vokatra mivaingana avy amin’ny fanjakana ny vahoaka momba ny fiainany andavanandro, fa tsy familivilian-tsaina fotsiny. Tsy hotanisana ny zavatra iainan’ny rehetra, fa raha ny momba ny fandriampahalemana fotsiny no resahina, mikaikaika ny olona. Mirongatra, hoy ny fiteny na lavin’ny mpitandro filaminana aza io teny mahalaza ny fijalian’ny vahoaka io. Mirongatra ny halatra lavanila, mahatafiditra […]
Volana jona, volana mampitaintaina…
Par Taratra sur 01/06/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Iray volan’ny teny malagasy. Iray volan’ny ankizy. Fanamarihana ny fetin’ny Fahaleovantena… Volana manasaraka ny taona, maresaka indrindra amin’ireo 12 diavina izy ity, raha ho an’ny Malagasy. Hanomboka anio ny volana jona. Nampiditra izany sahady ny feona tsipoapoakan’ankizy etsy sy eroa, izay nampitaintaina ireo tsy nahalala. Volana mampitaintaina tokoa izy ity, indrindra ho an’ny mpitondra ny […]
Tototra piraty i Madagasikara
Par Taratra sur 31/05/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Fantatra indray izao fa mitondra faisana mihitsy ny sehatry ny kabary amin’ny ataon’ny mpanao piraty… Tsy ny kolontsaina ihany fa ny fiainan’ny Malagasy manontolo mihitsy no tototry ny piraty. Tsy tena izy fa hosoka, dika mitovy, tsy manara-dalàna, sns. Samy azo andraisana ny hevitry ny piraty avokoa ireo. Inona amin’ny andavanandrom-piainan’ny malagasy no tsy iharan’ireo ? […]
Ny vahoaka izao no efa manohitra…
Par Taratra sur 30/05/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Misy mpanohitra mampitahotra fadiranovana sy tsy zakan’ny mpitondra avy hatrany? Mampivazavaza azy, mampievotrevotra, mampikoropaka… Na ahoana na ahoana, natao hitsikera ny mpanohitra, ary miseho fa manana fandaharanasa sy fomba fiasa tsara lavitra noho ny an’izay eo amin’ny fitondrana aza… Izay no hitetehana sy hakan’ny mpanohitra fitondrana, fa tsy hoe hiara-miasa amin’ny fitondrana izy na efa […]
Tsy fampitahana fa famitahana…
Par Taratra sur 29/05/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Resabe tato ho ato ny hoe fampitahana ny zava-bitan’ny mpitondra nifandimby. Mahavita be ny amin’izao? Mahita sy mahatsapa izay iainany ny isan-tokantrano, ny tsirairay… Mitondra fihatsaram-piainana ve ny hoe zava-bita? Izay no tena mila porofo iaraha-mitsara, fa tsy ny fahantram-bahoaka mihalalina sy mihamitombo. Fampitahana ve no ndeha hatao amin’ny famitahana? Amin’izao, tena mampirongatra, ohatra, ny […]
Mahalala izay iainany ny vahoaka
Par Taratra sur 27/05/2017 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny asa ihany no handresen-dahatra izay mitsikera? Marina izany. Tsy mila kabary tsy valina, na edinedina. Tsy mampitovy fijery kosa ny hoe tena miasa ny mpitondra, mandeha ny fampandrosoana… Ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Arakaraka ny toerana io. Mety miasa tokoa ny mpitondra amin’izay ataony any, saingy tsy araka ny hetaheta sy laharam-pahamehana […]